Ukuqubha ilanga ukhulelwe- Ngaba kulungile okanye mhlawumbi akunjalo? | IBezzia
USusana godoy | | Iingcebiso zezempilo
Ndingatshisa ilanga ndikhulelwe? Ngomnye wemibuzo eqhelekileyo koomama bexesha elizayo. Ke ngoko, akukho nto injengokuzama ukucima amathandabuzo ahlala esihlasela. Kungenxa yoko le nto ngoku siphakathi ehlotyeni kwaye sifuna ukunqunyulwa elangeni, sisenamathandabuzo ngakumbi.
Kubalulekile ukuba wazi izinto ezilungileyo kodwa nobubi obunokusiziswa lilanga. Ke lixesha lokuba uyenze icace ukuba kuyacetyiswa ukuba uthambise ilanga ukhulelwe okanye ngokuchaseneyo kungcono ukuhlala emthunzini ukonwabele indawo entle. Sikukhupha ngaphandle kwamathandabuzo!
1 Kwenzeka ntoni ukuba ndithambise ilanga ngelixa ndikhulelwe?
2 Ukuhlamba ilanga ngokukhulelwa: Iingcebiso ezilungileyo
3 Ngaba ndingatshiswa lilanga ngexesha lokukhulelwa?
Kwenzeka ntoni ukuba ndithambise ilanga ngelixa ndikhulelwe?
Ukuphendula lo mbuzo siza kuthi ukuba yenzeke, akukho nto iya kwenzeka. Kodwa kuyinyani ukuba kufuneka sithathe amanyathelo okhuseleko kancinci. Isizathu kungenxa yokuba ukuba kukodwa, ukuhlala elangeni kuhlala kufanelekile ukuba ulumke, ukhulelwe nangakumbi. Ngokukodwa ngenxa yotshintsho lwehomoni esinayo, enokuhlala ichaphazela ulusu kwaye iya kuba nobuthathaka ngakumbi. Kodwa ukungena elangeni ngaphakathi kwaye ngokulindela umntwana akufuneki kube kubi kuwe.
Ukuhlamba ilanga ngokukhulelwa: Iingcebiso ezilungileyo
Sele siyazi ukuba xa sithetha ngokubanzi, akufuneki kubekho naluphi na uhlobo lwengxaki. Kodwa kubalulekile ukuba nangona kunjalo, senza yonke into kwicala lethu ukuze sikwazi ukonwabela ihlobo ngaphandle kweziphumo ezibi. Ungatshisa njani ilanga xa ukhulelwe?
Sebenzisa ukhilimu omkhulu wokukhuselaInyaniso yeyokuba nangona ungayisebenzisanga phezulu kangaka ngaphambili, ngoku lixesha. Nokuba amaxabiso aphezulu angaphezulu kwama-50 ayacetyiswa, okanye iikhrimu ezithile ngakumbi kwiindawo eziqhele ukolula amanqaku njengesisu okanye amathanga, njl. Ngaphezulu kwayo nantoni na kuba sithetha ngolusu olubuthathaka kwaye ngenxa yoko, kufuneka lukhuselwe kakuhle.
Musa ukuba selangeni ngalo lonke ixesha. Oko kukuthi, unokuhamba, emanzini okanye emthunzini kanjalo. Kuhlala kubhetele kunokuxoka ngokuthe ngqo kwaye ixesha elide.
Zama ukuphepha iiyure eziphakathi zosuku Kwaye akucebisi ukuba uchithe ixesha elininzi elangeni. Kungenxa yokuba ubushushu bomzimba wethu buye buye bonyuka ekukhulelweni. Ngenxa yoko, siya kukuphepha ukubethwa sishushu okunokuthi kusoloko kuyingozi kuthi nakwiintsana.
Soloko uhlala unamanzi. Nokuba awunxanwanga kakhulu, sela amanzi. Yeyona ndlela ilungileyo yokuhlala uhlaziyekile.
Khumbula ukuba ubuso yenye indawo yokukhusela. Kuba amabala alinde ukuphuma kwawo ukuba asizisebenzisi iikhrimu ezifanelekileyo.
Zama ukungalali ngomqolo: Eli nyathelo lingakumbi lokolulwa kokugqibela kokukhulelwa, nangona uyakuyiqonda kuba ukungonwabi kuya kuyenza iphantse ibe yinto engenakwenzeka. Oko kulala ngomqolo akukuncedi nganto, ngenxa yokuhamba kwegazi. Kodwa unokuhlala kwisitulo esingqengqileyo okanye kwihammock.
Ngaba ndingatshiswa lilanga ngexesha lokukhulelwa?
Impendulo yokugqibela yombuzo kukuba ungatshisa ilanga, uye elwandle kwaye wonwabe ehlotyeni. Kodwa lumka, soloko ulumkile. Ukulandela ingcebiso yangaphambili kwaye oko kukuthi, kwelinye icala ilanga lilungele wonke umntu kodwa ngaphakathi komda. Uya kuthatha i-vitamin D kwaye oku kuyawenza amathambo akho omelele. Kodwa khumbula ukuba ikwanelona candelo lilibi. Amabala, ukubetha kobushushu kwaye kunganciphisa amaxabiso e-folic acid ebaluleke kakhulu kwesi sigaba, ngakumbi kwiinyanga zokuqala. Ke zibekele bucala iintsuku ezinde ezilele ilanga kunye nelinye ilanga elinomthunzi, ukuhamba okungaphezulu, amanzi amaninzi kwaye uyonwabele ihlobo njengoko kufanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iingcebiso zezempilo » Ukuhlamba ilanga ukhulelwe: ewe okanye hayi?
Uzihlamba njani izihlangu zakho kwaye uzenze zibonakale zilungile